क्रिकेट Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - इपिएल : भैरहवा ग्लाडिएटसको लगातार दोस्रो जित
काठमाडौं । भैरहवा ग्लाडिएटर्सले एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल)मा लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्सलाई १२ रनले पराजित गर्दै भैरहवाले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो । जितसँगै भैरहवाले चार अङ्क जोडेको छ । भैरहवाले दिएको १४४ रनको लक्ष्य पछ्याएको चितवनले पूरै २० ओभर खेलेर नौ विकेट गुमाइ १३१ रनमात्र बनाउन सक्यो । चितवनका लागि ओपनर पउल स्ट्रलिङले सर्वा्धिक ३६ रन बनाए भने जोन सिम्पसनले २६ तथा दिलिप नाथले १२ रन जोडे । शाहब आलमले नटआउट १६ रन बनाए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा विराटनगर वारियर्सले पोखरा राइनोजलाई सुपरओभरमा पराजित गर्दै प्रतियोगितामा दोस्रो जित दर्ता गराएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले विराटनगरलाई ८५ रनको विजयी लक्ष्य दिएको थियो । जवाफमा विराटनगर १९ दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ८४ रनमा समेटिएपछि खेल सुपरओभरमा गएको थियो । सुपरओभरमा विराटनगरले २० रन जोड्दै पोखरालाई २१ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जवाफमा पोखरा १३ रनमा सीमित भयो । विराटनगरको लागि करण केसीले २० रन जोडे ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग 'इपिएल' टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज दुई खेल हुँदैछन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिवी मैदानमा हुने पहिलो खेलमा विराटनगर वारिवर्स र पोखरा राइनोज तथा दोस्रो खेल चितवन टाइगर्स र भैरहवा ग्लाडियटर्सबीच हुने आयोजकले जनाएको छ । पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको विराटनगर र केली कोएट्जरको कप्तानीमा रहेको पोखराबीच पहिलो खेल बिहान ९ बजेदेखि शुरु भएको छ । पोखराविरुद्ध मैदान उत्रदा साविकको विजेतासमेत रहेको विराटनगर लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । पहिलो खेलमा ललितपुर प्याट्रियसलाई पराजित गरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
अष्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत विजयी !
एडिलेड । चेतेश्वर पुजाराले शानदार पारी खेलेपछि अष्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत विजयी भएको छ । ३ सय २३ रनको लक्ष्य पछ्याएको अष्ट्रलिया अन्तिम दिन सोमबार २ सय ९१ रनमै अलआउट भएपछि भारत ३१ रनले विजयी भएको हो । भारतलाई जिताउन रविचन्दन आश्विन, मोहम्मद शामी र जस्प्रित बुम्राहले समान तीन तीन विकेट लिए । एक विकेट भने इशान्त शर्माले हात पारे । अष्ट्रेलियाका लागि सन मार्शले सर्वाधिक ६० र नाथन लायनले नटआउट ३८ रन बनाएपनि टोलीको हार टार्न सकेनन । पहिलो पालीमा २ सय ५० रन बनाएको भारतले दोश्रो पालीमा ३ सय ७ रन बनाएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा ललितपुर प्याट्रीएट्सले चितवन टाइगर्सलाई हराएको छ। टस जितेर ब्याटिंग रोजेको ललितपुरले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर १ सय ४३ रन बनाएको थियो। एक सय ४४ रनको लक्ष्य पछ्याएको चितवन पुरै २० ओभर खेलेर ८ विकेट गुमाउँदै एक सय ३२ रनमै समेटिएको छ। ललितपुरको यो पहिलो जित हो। हिजोको खेलमा ललितपुर पराजित भएको थियो। ओपनर जयकिशन कोल्सावाला २० रनमा आउट भए भने कुशल भुर्तेल मात्र तीन रनमा पेभेलियन फर्किए । ६१ रनमा तेस्रो विकेट खेर फालेको ललितपुरले एक सय नौ रनमा चौथो विकेटका रुपमा सन्नी पटेललाई १९ रनमा गुमायो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिग 'ईपीएल' क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार दुई खेल हुँदै छन् । टियु क्रिकेट मैदानमा पहिलो खेलमा आज ललितपुर प्याट्रिएट्सले चितवन टाइगर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आफ्नो पहिलो खेलमा नै विराटनगर वारियर्ससँग ३ विकेटले पराजित भएको ललितपुर दोस्रो खेलमा जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ । चितवन पनि आफ्नो पहिलो खेलमा जित हात पार्दै सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा छ । पहिलो खेल विहान ९ बजेदेखि सुरु हुनेछ । आजै हुने दोस्रो खेलमा भैरहवा ग्लाडिएटर्सले पोखरा राइनोजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । दुवै टिमको यो पहिलो खेल हो ।	थप पढ्नुहोस्
पहिलो पालीमा भारतलाई १५ रनको अग्रता !
एडिलेड । अष्टे्रलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतलाई १५ रनको अग्रता मिलेको छ । एडिलेडमा दोश्रो दिनको शुरुमै जस्प्रित बुम्राह र मोहम्मद शामी मिलेर अन्तिम ३ विकेट लिएपछि अष्ट्रेलिया २ सय ३५ रनमा अलआउट भएको हो । पहिलो पालीमा भारतले २ सय ५० रन बनाएको थियो । अष्ट्रेलियाका लागि टे्रभिस हेडले ७२ र पिटर ह्यान्डसकबले ३४ रन बनाउनु बाहेक अरुले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन । भारतका रविचन्द आश्विन र जस्प्रित बुम्राहले तीन तीन तथा इशान्त शर्मा र मोहम्मद शामीले दुई दुई विकेट लिए । शनिबार नै आफ्नो दोश्रो पाली थालेको भारतले राम्रो शुरुवात गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
वीरगंज । नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीले काठमाडौंको मुलपानीमा आयोजना गरेको मिलानो नेक्सस कप अन्डर १६ टि—ट्वाइन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता टोली वीरगंज युनाइटेडलाई गृहनगर वीरगंजमा सम्मान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले एक कार्यक्रम गरि टोलीलाई सम्मान गरेको हो । मंसिर ७ देखि १४ गतेसम्म चलेको प्रतियोगितामा सहभागि १२ टोलीलाई उछिन्दै वीरगंज युनाइटेडले उपाधी चुमेको थियो । प्रतियोगिताको फाइनलमा वीरगंज युनाइटेडले सनराईज क्रिकेट क्लब महेन्द्रनगरलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
नवोजित सिद्धूको दिमाग तगडा, आवाज गुम्ने खतरा !
काठमाडौं । भारतीय पूर्व क्रिकेटर एवं पञ्जाबका क्याबिनेट मन्त्री नवोजित सिद्धूको आवाज गुम्ने खतरा बढेको छ । पाँच राज्यको चुनाव प्रचारप्रसारका बेलामा धेरै खटिएपछि उनको आवाजमा समस्या आएको हो । सिद्धूले काँग्रेस आईका लागि चुनावी र्यालीमा सहभागी हुने क्रममा १७ दिनमा ७० र्यालीमा सम्बोधन गरेका थिए । चिकित्सकका अनुसार सिद्धूलाइृ लिरिंगजाइटिस भएको छ । चिकित्सकले उनले पाँच दिन आराम गर्न सल्लाह दिएका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार सिद्धू लगातार हेलिकोप्टरमा तथा फ्लाइटमा यात्रा गर्दा अझ बढी बिमार भएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
क्रिकेटको विवाद समाधान गर्न आईसीसी प्रतिनिधि काठमाडौंमा
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र कमिटिको बैठक भोली शनिबार काठमाडौंमा बस्दैछ ।बैठकमा सहभागिता जनाउन आईसीसीका प्रतिनिधि काठमाडौं आईपुगेका छन् । कमिटि सदस्यहरु मोहमद अलि र अमर शेख काठमाडौं छन् । ईमरान ख्वाजा राति ९ बजेसम्म काठमाडौं आईपुग्ने कार्यतालिका रहेको स्वतन्त्र कमिटि सदस्य ठाकुर प्रताप थापाले बताए । काठमाडौंमा दुई दिन सम्म चल्ने बैठकले क्रिकेट विवाद समाधानको रोडम्यापमा सहमतीको प्रयास गर्नेछ । कमिटिमा आईसीसीबाट तीन र नेपालबाट दुई जना प्रतिनिधि छन् ।	थप पढ्नुहोस्